Akandishadaburisa makumbo ndokunangisa zinhu rake ndokuriti shwee | Nhau Dzevakuru
Home Nhau DzeBonde Akandishadaburisa makumbo ndokunangisa zinhu rake ndokuriti shwee
Akandishadaburisa makumbo ndokunangisa zinhu rake ndokuriti shwee
Max akandisimudza ndokundiisa pamubhedha ndakarara nemusana, akandishadaburisa makumbo ndokuuya pamusoro pangu, akanangisa zimboro rake ndokuriti shwee, maiwee mboro inonaka iyoyo, handaiziya kuti mboro yakachekwa inonaka kudaro, apa yaipisa mai kani?
Ndakatanga kuchemerera ndichikoira nekutunda zvese ipapo ipapo, izvi zvakabva zvamutsisa friend yangu, she woke up and started smiling .Apa anenge aive achiri akadhakwa hake sevanhu vainge varara kuparty tichifara hedu.
Ndichisvirwa kudaro akabva auya pandaiva ndokukotama ndokutanga kuyamwa minyatso yangu yangu, apaMax arikuzhaka beche rangu, ndakatunda again there and then.Friend yangu yakabva yabvisawo hembe dzese, Max haana kupedza nguva masasi, akabva aizvomora, ndokunangisa pabeche refriend yangu, akamutora ndokumufongoresa, hameno kuti anga agarwa nei, ndokubva aipfekera, umm mwana akasvirwa zvekuti ndakapotsa ndanzwa tsitsi, ndakatotanga kunzwa zemo nemasvirirwe aitwa friend yangu.
Pakapedza Max kusvira shamwari yangu ndainge ndanzwa nezemo, ndakaita kunge munhu anonokerwa ndokurara futi nemanhede ndichibva ndabata mboro yake ndakainangisa pabeche rangu, ndaiyita kuterera ndichiinzwa ichipinda ichivhura matinji angu ichinyura yese.
Ndaiita kuchemerera zviri pasi pasi zvekuti ndainatsonzwa kuti ndirikunakirwa mhani masasi, ndakazotanga kuti svvv ahhh shaaa!!!, amai kaani, ndakutuuuuundaa, nekavoice kari pasi pasi, bva ndamunzwa achigwinha gwinha mboro yake mukati, ndikaziya kuti mwana anakirwawo nebeche bvaatunda. Max ndomuziya anonaka asikanaka!!!.ipapo ndanga ndisisina choice, ndakangonyudza chigunwe changu mukati mebeche rangu nekutunda ipapo ipapo, ndakangoshinyira ndega bva ndaoma ndakadaro.
Previous articleNdakaipinza yese ndokutanga kumuisa patable mukitchen imomo!
Next articleNdakaramba ndakatarisa zvidya zvake yakabva yaita kutepuka ichimira!